We.com.mm - ဘဝနေဝင်ချိန်ကို တိတ်တိတ်လေးဖြတ်သန်းရတဲ့အခါ ....
မတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀၊ ရန်ကုန်။
ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ( COVID-19 ) ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန် စပိန်အာဏာပိုင်တွေက မက်ဒရစ်မြို့ရဲ့ လမ်းမတစ်ချို့၊လမ်းကြားတစ်ချို့ နဲ့ သက်ကြီးဂေဟာတွေကို ပိုးသတ်ဆေးတွေဖြန်းဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့ စစ်သည်တွေကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်သည်တွေဟာ သူတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ချို့ကြောင့် အတော့်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဂေဟာထဲမှာ လူမသိသူမသိသေဆုံးနေတဲ့ ဘိုးဘွားတစ်ချို့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ စပိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို ကြေငြာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်အရှိဆုံးလဲ ဆိုတာပါပဲ။ COVID-19 ကူးစက်မှုတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတဲ့အချိန်၊ ဂေဟာက ဘိုးဘွားတစ်ချို့ ကူးစက်ခံရပြီးဖျားနာလာတဲ့အချိန်မှာ ဝန်ထမ်းတော်တော်များများက ဂေဟာကို မသွားတော့ပဲ နေခဲ့ကြတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ ဘိုးဘွားတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီး လူမသိသူမသိသေဆုံးခဲ့ကြတာပဲ။ ပြောရရင်တော့ ရောဂါကူးမှာကြောက်တာနဲ့ပဲ ဘိုးဘွားတွေကို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် စွန့်ခွာခဲ့ကြတာပါ။
အကြောင်းစုံသိလိုက်ရတဲ့ စပိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မာဂရီတာ ရိုဘဲလ်စ် က " ကိုယ့်တာဝန်တောင်မှ ကိုယ်ကျေအောင် မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေ စပိန်ရဲ့ ဥပဒေဘယ်လောက်အာဏာပြင်းသလဲသိရမယ် " ဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးခဲ့တယ်။
ဒီလိုကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်က ပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေက မွန်တီဟာမိုဆို သက်ကြီးဂေဟာမှာလည်း ဘိုးဘွား ၂၅ ဦးလောက် COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီး လူမသိသူမသိသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်။ ဘိုးဘွားတွေဘာကြောင့် အဲ့ဒီလိုမျိုးသေဆုံးရသလဲဆို အများစုက လိုအပ်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုမခံရတာတွေ၊ ဆေးရုံကို အချိန်မီမပို့တာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တော်တော်ကြေကွဲဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါ။
ဘိုးဘွားတွေသေဆုံးရတာ အဲ့ဒီနေရာတင်ပဲလားဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် သက်ကြီးဂေဟာတွေမှာ COVID-19 အရှိန်မြင့်လာလို့ ဝန်ထမ်းတွေမလာတော့တဲ့အခါ ပြုစုမဲ့သူမရှိ၊ ဂရုစိုက်မယ့်သူမရှိပဲ COVID-19 ကြောင့် အထီးကျန်၊ တိတ်တဆိတ်လေးသေဆုံးသွားရတဲ့ ဘိုးဘွားတွေရှိပါသေးတယ်။
မီးစာကုန်ဆီခမ်းနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝနေဝင်ချိန်က ဒီ့ထက်ပိုပြီးသက်သက်သာသာလေးဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေးမိကြမှာ။ အခုတော့ သူတို့တွေကို ကောင်းကင်ဘုံက သူတော်စင် ပီတာ နဲ့ သူတော်စင် ပေါလ် တို့ ကောင်းချီးပေးနေကြတယ်လို့ ဆုတောင်းမိရုံကလွဲပြီး ...
Original Link - https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/23/spanish-army-finds-abandoned-dead-bodies-old-peoples-homes/?fbclid=IwAR3LrRiJOBqKKYrqmzg4Qwyg1yag3Gaj9DwLgXZWF-jtknrSuW1875Bb4Z8
(The Telegraph မှ Spanish Army finds abandoned dead bodies in old people's homes ကို ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုပါသည်။)
Social Media မှာ Share ရင် ထောင်ဒဏ်(၅)နှစ်ကျနိုင်တဲ့ ထိုင်း Hip Hop သီချင်း
အဖြစ်ဆိုးကြီးမကြုံခင် ရှုတင်မှာ ဒီပြိုင်ကားနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ကိုမြင့်မြတ်
ရေကြီးပြီး တောင်ပြိုမှုကြောင့် နေအိမ်(၄၀)ကျော် မြေပိကာ လူအသေအပျောက်များနေ
သရဲနဲ့တွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲ ? သရဲကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ ?
21 days ago by WaiLin